R/Wasaraaha Spain oo shaaciyay xilliga uu fariisanayo baarlamaanka Catalonia | Saxil News Network
R/Wasaraaha Spain oo shaaciyay xilliga uu fariisanayo baarlamaanka Catalonia
December 29, 2017 - Written by editor
Image captionRa’iisul Wasaare Rajoy ayaa sheegay inuu rajaynayo in Catalonia ay dowlad ku yeelan doonto sida ugu dhaqsiyaha badan
Ra’iisul Wasaraaha Spain ayaa sheegay in baarlamaanka cusub ee Catalan ay tahay inuu kalfadhigiisa ugu horreeya uu yeesho 17-ka bisha Janaayo, ka hor inta uusan awoodda u soo celin dowladda gobolkaasi.
Hadalka Mariano Rajoy ayaa imanaya todobaad un kaddib markii xisbiyada goonni u goosadka ee Catalonia ay ku guulaysteen aqlabiyad doorashadii xasaasiga ah aheyd ee degdega aheyd.
Rajoy, ayaa ku baaqay doorashada si uu isugu dayo inuu meesha uga saaro iskudayga madaxbannaanida ee ay wadeen hogaamiyayaasha gobolkaasi sidaana uu ku soo gebagabeeyo dhibaatada siyaasadeed ee halkaas ka taagan.
Dadka ka faalooda arrimaha Spain ayaa sheegaya in muddo bilooyin ah ay qaadan karto in la soo dhiso dowlad ay leedahay Catalan.
“Waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay inoogu suuroobi doonto inaanu dowlad uga dhisno Catalan, taas oo u furan wadahadal xiriirna la leh dhammaan dadka Catalan,” waxaa sidaas khudbadda dhammaadka sanadka ee uu Jimcihii u jeediyay qaranka ku sheegay Mr Rajoy.
Waxa uu carrabka ku adkeeyay in codka loo qaadayo madaxweynaha cusub ee Catalan ay tahay qasab inuu ku dhaco 10 maalmood gudahood markii ay kulmaan xubnaha baarlamaan goboleedka.